Mayan परभक्षी |
प्राप्त यो संग पुरातन Mayan पल्ट ओसारपसार गर्न तयार निःशुल्क Spins स्लट तपाईं के विन राख्न, Mayan Legend. यो अचम्मको ग्राफिक्स र प्रस्ताव छ3जीत तरिका. यो निःशुल्क Spins स्लट राख्नुहोस् के तपाईं जीत सबै मास्क सङ्कलन र विजेता विशाल नगद बारेमा छ. यस, तपाईं शुद्ध भाग्य तर पासा र केही रोल छ. यो जो जुन kinase गेमिङ विकासकर्ताहरूले यो अचम्मको खेल को डिजाइन र निर्माण पछि हुन्छन्. आफ्नो प्रतिष्ठा प्रति रूपमा, तिनीहरूले यो सिर्जना मा एक अचम्मको काम गरेका निःशुल्क Spins स्लट राख्नुहोस् के तपाईं जीत.
त्यहाँ अर्को संसारमा तपाईं TRANSPORTS एक राम्रो खेल जस्तै केही छ. त्यसैले, तयार र केही ठूलो पुरस्कार प्ले यो तत्काल जीत खेल र झोला आफैलाई सुरु.
द Mayan परभक्षी एउटा नयाँ विश्व अन्वेषण
सुन्दर रंग को एक चयन सबै मास्क सिर्जना यहाँ प्रयोग गरिएको छ. यो मास्क पूर्ण भएको स्लट को विषय अनुरूप डिजाइन गरिएको छ. यो मास्क उनको रंग द्वारा भिन्नता गर्न सकिन्छ: नीलो, green, बैजनी र पहेंलो. यो एक pinkish आरु आकाश संग एक वन पृष्ठभूमि र पृष्ठभूमिमा मा रूखहरू विरुद्ध सेट गरिएको छ. आफै मा स्लट एक पर्खाल छ. स्क्रिनको एक पक्ष मा तपाईं दुई dices देख्न सक्नुहुन्छ, एक काले र एक सेतो र स्क्रिनको अन्य पक्षमा तिनीहरूले नाश आइरह्यो रूपमा मास्क को रंग संग भर्नु राख्छ कि तालिका छ. यो RTP पनि धेरै उच्च छ, एक स्तरमा पुग्नु 85.16%.
यो निःशुल्क Spins स्लट राख्नुहोस् के तपाईं जीत एक धेरै नै सरल गेमप्लेको छ. All you need to do is roll the dice and the masks on the table will keep getting destroyed. सुरु मा, तपाईं क्लिक गरेर आफ्नो शर्त को खम्बा सेट गर्न आग्रह गरिने + र – options. त्यसपछि तपाईं प्ले विकल्प क्लिक हुनेछ र खेल सुरु हुनेछ. दुई dices देखि निर्देशांक देखाउने 1-6 प्रत्येक अन्त लागि. ती निर्देशांक मा हो मास्क नष्ट प्राप्त र नष्ट एक समान छ कि कुनै पनि अन्य आसन्न मास्क पनि नाश. रंग को पंक्ति मास्क को संख्या संग भर्नु राख्न हुनेछ. जब तपाईं पूर्णतया एक पङ्क्ति भर्न, तपाईं आफ्नो जीत लागि पुरस्कृत गरिनेछ.
यो निःशुल्क Spins स्लट राख्नुहोस् के तपाईं जीत यो जस्तै एक खेल रुचि गर्न मानिसहरूको लागि आवश्यक छ कि सबै छ. विशाल विजेता सम्भावित, क्रिस्टल स्पष्ट ग्राफिक्स, अचम्मको ध्वनि प्रभाव र एक रोचक गेमप्लेको Mayan दन्त्यकथा को gamblers बीच सबैभन्दा नाटक को एक बनाउँछ के हो.